Xildhibaannada Golaha Shacabka oo loo soojeediyey iney teleefannada damiyaan! – Kalfadhi
Xildhibaannada Golaha Shacabka oo loo soojeediyey iney teleefannada damiyaan!
Warar laga helayo Golaha Shacabka ayaa sheegaya in Xildhibaannada Golaha loo soo jeediyey in ay teleefannada damiyaan. Sababtu waxaa lagu sheegay in uu guddoonku u arkay in ay xildhibaannada qaar banaanka u bixinayaan xogta kulanka ay albaabada u xiran yihiin ee hadda u dhaxeeya Golaha Shacabka iyo Laamaha Amniga. Internet-kii Xarunta Golaha ayaa, sidoo kale, la jaray.
Lama hubo in ay Xildhibaannadu soojeedintaas toos u qaateen, oo ay wada fushay iyo in kale. Laakiin, Kalfadhi ayaa weysay xiriirka Xildhibaanno gudaha ku jiray oo ay dhawr mar la xiriirtay intuusan kulanka furmin iyo bilowgii markii uu kulanka furmayeyba, kuwaas oo aan teleefannadooda laga jawaabeynin. Tan ayaa macquul ka dhigi karta iney shaqeysay soojeedinta Guddoonka Golaha Shacabka.
Kalfadhi waxay kaloo ogaatay in shaqaalaha Golaha Shacabka oo dhan dibadda looga soo saaray goobta kulanka ee ay ka socoto doodad amniga. Kaliya Xildhibaannada, oo uu wehliyo Guddoonkooda, iyo Laamaha Amni ayaa isugu soo haray hoolka kulanka uu ka socdo, sida ay Kalfadhi u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah.
Nabad Sugidda Soomaaliya oo la sheegay in ay iska diiday iney ka jawaabto su’aalihii Xildhibaannada